Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Delta na-agbakwụnye ihe karịrị 100 ụgbọ elu ọhụrụ si New York
Delta na-agbakwụnye ihe karịrị 100 ụgbọ elu ọhụrụ si New York.
Mmụba ikike Delta Air Lines na -eweghachikwa nkwụsị na azụmaahịa iri anọ kacha elu US site n'ọdụ ụgbọ elu JFK na LaGuardia nke New York.
Delta Air Lines na -agbakwunye ụgbọ elu 100 kwa ụbọchị na NYC ọdịda a - mmụba ikike 25% ma e jiri ya tụnyere oge ọkọchị 2021.
Delta Air Lines na -eweghachi ọrụ akwụsịghị na nnukwu ụlọ ụlọ iri anọ nke New York City.
JFK na LGA kacha ebu ụgbọ elu na -arụ ọrụ ụgbọ elu 400 kwa ụbọchị na ebe 92.
Mgbe mgbake oge ọkọchị gasịrị, Delta Air Lines anaghị akwụsịlata iweghachite ụgbọ elu na ebe ndị ọzọ maka azụmahịa na ndị njem ntụrụndụ n'otu oge.
Ka ọ na -erule Nọvemba, Delta Air Lines ga -agbakwunye ihe karịrị 100 ọpụpụ kwa ụbọchị site na Ọdụ ụgbọ elu John F. Kennedy na ọdụ ụgbọ elu LaGuardia ma e jiri ya tụnyere oge ọkọchị nke ụgbọ elu 2021 - ịsụgharị ihe dị ka oche 8,000 kwa ụbọchị nye ndị mmadụ na ebe ndị New York kachasị hụ n'anya.
Site na ndị na -azụ ụlọ na -alaghachi na ọkwa 2019, Delta Air Lines gbadoro anya na iweghachi ikike n'enweghị nsogbu yana ntụkwasị obi ka njem azụmahịa na -eburu mpịakọta a na -ahụbeghị kemgbe ọrịa ọjọọ bidoro.
Joe Esposito, SVP - Delta Planning. "Anyị na -aga n'ihu na -enye nhọrọ na ịdị mma karịa ka anyị na -ewughachi njikọta ụwa anyị ma na -ebuga ihe Delta na -eme nke ọma - na -ebute ndị ahịa anyị ụzọ pụrụ iche, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ahụmịhe njem kacha mma."
Ọbụghị naanị na Delta ga-eweghachi ọrụ na-akwụsịghị akwụsị na ahịa ụlọ iri anọ kacha ewu ewu na New York n'ọnwa na-abịa, mana ọtụtụ azụmaahịa azụmaahịa dị mkpa ga-ahụkwa nkwalite bara uru na nhọrọ ụgbọ elu, gụnyere Boston (BOS), Washington, DC (DCA), Raleigh- Durham (RDU) na Charlotte (CLT). Nke a na -esote ọrụ Delta agbasawanyela na nnukwu ụlọ ọrụ NYC na mbido ọdịda a, dị ka Chicago (ORD), Dallas/Ft. Ụtọ (DFW) na Houston (IAH) - akụkụ nke ụzọ nchebara echiche nke Delta iji gbakwunye ikike kwekọrọ na nloghachi nke ọchịchọ.
Delta malitekwara ọrụ ọhụrụ LGA na Toronto (YYZ) n'oge na -adịghị anya wee malite ụgbọ elu ọhụrụ na Worcester, Massachusetts (ORH) malite na Nọvemba 1.
Delta ga -enye ọtụtụ ụgbọ elu na oche nke onye ọ bụla na -ebu ụgbọ na JFK na LGA nwere ngụkọta ngụkọta kwa ụbọchị 400 na ebe obibi 92 na mba ụwa. Ụgbọ elu Delta ọ bụla na JFK, LGA na EWR ga-enye ahụmịhe klaasị nke mbụ, n'ihi mwepụ nke ụgbọ elu pere mpe, oche iri ise na ahịa NYC niile.
Delta agbasawanyela ụgbọ elu Airbus A220 na New York, na-agbakwunye mgbasawanye yiri ya na ọdụ Boston anyị na-eto ngwa ngwa, na Chicago (ORD), Dallas/Ft. Worth (DFW) na Houston (IAH). A220 na-enye ndị ahịa ahụmịhe sara mbara, nke ọgbara ọhụrụ na nnukwu oche nnukwu ụlọ n'ime ụgbọ mmiri anyị, nnukwu ihe mgbochi dị elu na nnukwu windo.
Ka oge njem ezumike na -abịaru nso na US na -agụpụta mbuli mmachi njem na ndị ọbịa mba ofesi gbara ọgwụ mgbochi, Delta ga -agbakwunye ọrụ New York na Pọtụfoliyo ụwa ya na njedebe nke 2021.
Gafee Atlantic, Delta ga -arụ ọrụ ruru ụgbọ elu iri na ise kwa ụbọchị ruo ebe iri na atọ n'ọnwa Disemba.
Delta ga -agbago ụgbọ elu abụọ na -aga Paris (CDG) na London (LHR) ugboro abụọ n'ụbọchị yana ịbawanye ọrụ kwa ụbọchị maka Dublin (DUB) malite na Disemba 6.
Maka ezumike oyi, Delta ga -ebido ụgbọ elu nke abụọ kwa ụbọchị na Tel Aviv (TLV) malite na Disemba 18 wee weghachite ụgbọ elu na -aga Lagos (LOS) ugboro atọ n'izu na Disemba 7.
Na mgbakwunye, Delta ga -eweghachi ọrụ na -akwụsịghị akwụsị na Frankfurt (FRA) na Disemba 13, nke arụ ọrụ ikpeazụ na Machị 2020.
Maka Latin America na Caribbean, Delta ga-arụ ọrụ ihe karịrị ụgbọ elu iri abụọ kwa ụbọchị ruo ebe iri na asatọ, na-eweghachi ikike ihe ruru 20% nke ọkwa ọrịa na-efe efe.
Maka ndị na -achọ ọpụpụ na -ekpo ọkụ, Delta ga -amalitegharị ọrụ na São Paulo (GRU) na Los Cabos (SJD) na Disemba 19, gbakwunyere ọrụ ịbawanye kwa ụbọchị maka St. Thomas (STT) na St. Martin (SXM) na Disemba 18 .
Delta ga -ebuputa ọrụ ọhụrụ site na JFK ruo Panama City, Panama (PTY), na Disemba 20.